Ogaden News Agency (ONA) – Yaman oo Siwayn Looga Xusay Sanadguurada 31aad ee JWXO
Yaman oo Siwayn Looga Xusay Sanadguurada 31aad ee JWXO
Caawa waxaa si weyn looga xusamay Magalada Sanca ee dalka yaman sanadguuradii 31aad ee ONLF Xaflada aad u weyn ooy soo qaban qabiyeen Jaaliyada Dalka Yeman ayaa cawa waxay ka dhacday hoolka Qaxootiga Somalida Ogadenia ee Magalada Sanca ee dalka yeman.
Waxaa xafladan si rasmi ah u furay Gudoomiyaha Jaaliyada Yemen Mudane Axmed Nuur. Wuxuu gudoomiyuhu kawaramay xaalada Halganka iyo taariikhdii dheerayd ee lasoo maray. Waxaa kaloo munaasibadan kahadlay Hogaanka Abaabulka & Arimaha Bulshada Mudane aliyada Dalka Yeman iyo Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada Mudane. Masuulii kahadashay xaflada ayaa halbalyo udiray dhamaan bahda Halganka Somalida Ogadenya.-
Xafladan waxaa wacdaro Hidaha iyo Dhaqanka Somalida Ogadenia lagu yaqanay ku soo bandhigay kooxda Horseed Qaran iyo Ururka OYSU halkaasna ku soo bandhigay Dhaantooyin iyo Gabayo iyo Maajiilo Nolasha Xafladan ayaa dad weynihii ka soo qab galay oo aad u fara badnaa aad uga maqsuuday Dabaaldaga iyo Sanad guuradan JWXO wacdaraha ay soo bandhigeen kooxda Horseed Qaran iyo Ururka OYSU yeman Sanca.
Isku soo duboo Xafladan Sanadguurada JWXO ee 31aad ayaa waxay ku soo gaba gabawday jawi aad u wanagsan iyo faxrad laga dheehanayay dhamaan bulsha weynta Somaliyeed ee xaflada goob jooga ka aheyd waxayna dhamaan iskugu Hambalyaynayeen Sanad guuro wacan Sanadka soo socdana allaha ha nagu kulan siiyo Gayigeenoo xor ah.